Zaambiyaa fi KootDivoor(Ivory Coast) Waancaa Kubbaa Miila Afrikaaf Walti Qophaahuutti Jiran
Guraandhalaa 11, 2012
Qaraa, biyya 50 caalutti jalqabe,eegee 16 walti hafe ,sun keessaa amma lamatti waancaaf waliin taphata.Taphii dorgommii kubbaa miilaa Afrikaa,28tessoon dhumachuutti jiraa,bori Zaambiyaa fi Ayvoorii Koosti(Côte d'Ivoire) waliin taphatan.
Zaambiyaan,ta ganna 19n duratti taphattootii kubbaa miilaa isii 23 xuyyuurii lafaan dhahee fixe taan amma asi gahuun gammachuu guddoo.Jarii kun silaa moohatee waancaa sun oli fuudhee,dhungatee wal irra marse jechuun biyya tanatti namii imimmaan haqachaa jara dhumate qaabachaa jiraata.Taatullee Ivory Coast moohachuun dubbii akkanumatti dhuftuu miti
KootiDivoor ammo biyya duruu waancaa Afrikaa argattee ammallee lammeeffachuuf itti jirtu.
Zaambiyaan gareen,Chipolopoln tun asi gahuuf;Equatorila Guinea 1-0 qaariftee,Suudan ammoo 3-0 lafaan dhooftee,Gaanaa 1-0 ufi jalaa buuftee asi geette.
KootiDivoor ykn Ivory Coast ammoo;Equatorial Guinea 3-0 lafa buuftee,Angoolaa 2-0 callisiiftee,Maalii 1-0 itti galchitee bira dabarte.
Gareen KootiDivoor(Elephants) tun ammallee taphattoota biyya alaatii fidatte hedduu waan qabduuf sodaatan.Rasaasnii Zaambiyaa woma Gaanaa,(Black stars) godhe kaan goonaan wannii jarii Arba Ivory Coast lafaan hin dhoofneef hin jirtu.Arbii,Ayivoorii Koosti ammoo dhufuma dhufee kubbaa gooli jalaan gahatee jennaan waan innii godhu abbaa beekutti beeka.
Woma taateefuu gareen KootiDivoorii fi Zaambiyaa,arbaa fi rasaasii bori taphatan.
Qophii Ispoortii ta tana mee MP3 tana irraa caqasaa.
Mee Qophii Hardhaa Caqasaa